HomeHoryaalka IngiriiskaWararka suuqa kala iibsiga ee Manchester United: Ansu Fati, Paul Pogba, Diogo Dalot
November 21, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa haatan xirmay iyadoo Manchester United ay lumisay dhowr bartilmaameed oo uu kamid yahay Jadon Sancho.
Red Devils ayaa mashquul ku jirtay maalintii ugu dambeysay, inkastoo ay keensadeen Edinson Cavani, Alex Telles iyo Facundo Pellistri, iyadoo ay u dheer tahay inay ogolaadeen heshiis ay kula wareegayaan Amad Traore bisha Janaayo. xidigo kale ayay lasoo wareegidoonaan marka uu suuqa furmo.
Ciyaaro.com ayaa soo koobaya wararka Manchester united ee Suuqa
Da’yarka kooxda Barcelona Ansu Fati ayaa lagu soo waramayaa in dalab € 150m (£ 134m) uu ka helay Manchester United intii lagu jiray suuqii xagaaga.
18 jirkaan ayaa dhaliyay 13 jeer, waxaana uu diiwaan geliyay shan caawin 43 kulan oo uu u saftay Barca tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda koowaad, oo ay ku jiraan shan gool iyo afar caawin 10 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa la filayaa inuu garoomada ka maqnaado ilaa bisha Maarso dhaawac jilibka ah laakiin kooxdiisa ayaa la sheegay inay ka shaqeyneyso qandaraas cusub oo ku eg illaa xagaaga 2026.
Sida laga soo xigtay Sport , xidigan ayaa qorsheeyay inuu 150m (£ 134m) ugu dhaqaaqo United, laakiin Barca ayaa si deg deg ah ku diiday dalabkaasi
Warbixinta ayaa sheeganeysa in kooxda ka dhisan La Liga aysan xitaa diyaar u aheyn inay madadaaliyaan dalabkaas sababo la xiriira muhimadda ay Fati u leeyahay qorshahooda muddada dheer, gaar ahaan iyadoo Lionel Messi la filayo inuu baxo xagaaga soo socda.
Da’yarkaan ayaa la rumeysan yahay inuu haysto qandaraaskiisa haatan ee Camp Nou aduun dhan 7 367m.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fiirsanayo inuu hoos u dhigo qandaraaskiisa Old Trafford isla markaana uu si xor ah uga tago kooxda xagaaga 2022.
Mustaqbalka Pogba ee Manchester ayaa mar kale la isla dhexmarayaa, iyadoo ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka uu qirtay inuu ka walaacsan yahay xaaladdiisa kooxeed intii uu ku jiray waajibaadka France iyo fasaxii caalamiga ahaa ee dhowaa.
Juventus iyo Real Madrid ayaa labadoodaba la rumeysan yahay inay xiiseynayaan saxiixa 27 jirkaan, inkastoo United la sheegayo inaysan diyaar u aheyn inay ku iibiso ciyaaryahanka khadka dhexe qiimo jaban.
Sida laga soo xigtay The Athletic , ciyaaryahanka reer France ayaa ka fiirsanaya inuu ka tago qandaraaskiisa haatan, kaasoo dhacaya June 2022, ka hor inta uusan si xor ah uga tagin Old Trafford.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Pogba uu heysto doogiisa kooxo dhowr ah oo caan ah oo Yurub ah laakiin waa la arki doonaa hadii Red Devils ay isku daydo inay iska iibiso xagaaga soo aadan.
Ciyaaryahankii hore ee Le Havre ayaa kaliya hal gool dhaliyay 11 kulan oo uu u saftay United xilli ciyaareedkan, waxaana uu ka maqnaa safka koowaad ee Ole Gunnar Solskjaer isbuucyadii dhawaa.
Manchester United ayaan xiiseyneynin inay iibiso Diogo Dalot maadaama ay rajo weyn ka qabaan daafaca, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen
Weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho ayaa ku wargaliyay kooxdiisa Jarmalka inuu doonayo inuu ku biiro Manchester United sanadka 2021.
Barcelona ayaa ka walaacsan in Ousmane Dembele uu si bilaash ah uga tagi karo kooxda, madama uu heshiiskiida dhacayo
Lix ka mid ah kooxaha waaweyn ee Premier League ‘oo dhammaantood xiiseynaya Sergio Ramos’ Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa dhammaantood doonaya inay la soo wareegaan xiddiga Real Madrid Sergio Ramos.
intaasi waa wararka Xanta Suuqa ee Man united